Fa mitàna ny sain’ny maro ankehitriny ny tohin’ny hetsika ataon’ny ministera tompon’andraikitra taorian’ireny fanamarinana nahatrarana vokatra tsy ara-dalàna teny Tanjombato ireny. Raha ny tokony ho izy mantsy dia tokony efa nakatona mihitsy iny orinasa izay saika nanapoizina ny Malagasy iny. Mbola mahaliana ny Malagasy ihany koa ny tohin’ny raharaha tany Antsirabe izay nisian’ny sakafo lany daty kanefa tsy naharenesam-baovao intsony ny tohiny. Nisy ihany koa ny fanamarinana natao vao tsy ela akory tany Toamasina saingy tsy fantatra mazava ny votoatiny amin’izao fotoana izao. Ny resaka famarotana ny harem-pirenena tahaka ny andramena moa dia tsy nahitana mangirana intsony fa natao nadilo sofina tamin’ireo nolazaina ho fositra vitsivitsy fotsiny ny Malagasy kanefa maro no mbola miriaria an-kasahiana eny rehetra eny. Miandry ny fahaiza-manaon’ny governemanta hatrany ny vahoaka indrindra ny fitantanana ny raharaham-pirenena miaraka amin’ireo hetsika ara-toekarena izay efa natomboka. Ambetintenin’ny filoha ankehitriny ihany koa moa ny hoe fandraisan’andraikitra haingana manoloana ireo tranga sahala amin’izany rehetra izany izay tsy tsara sady manimba toekarena. Mila fandraisan’andraikitra haingana ny Malagasy ndrao dia ho very sahady ny fitokisana napetrany.